June 8, 2019 - CeleLove
” စာမေးပွဲကျရှုံးတဲ့ ကျောင်းသား၊ ၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့အားပေးစကားနဲ့ အားပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမပုညခင် “
June 8, 2019 Cele Love 0
” စာမေးပွဲကျရှုံးတဲ့ ကျောင်းသား၊ ၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့အားပေးစကားနဲ့ အားပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမပုညခင် “ စာရေးဆရာမ ပုညခင်ရဲ့ ဝတ္ထု တော်တော်များများကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ဝတ္ထုကအစ ရုပ်ရှင်အဆုံး တစ်ခဲနက်အားပေးခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမရဲ့ စာအုပ်တော်တော်များများကတော့ ရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည် အသက်သွင်းလိုက်ရင် အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင်တာတော်တော်များများပဲ […]
ဒယ်အိုးနီ သုံးတတ်တဲ့ မိဘပြည်သူတွေ ဒယ်အိုးနီရဲ့ အန္တရာယ် အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ဒယ်အိုးနီ သုံးတတ်တဲ့ မိဘပြည်သူတွေ ဒယ်အိုးနီရဲ့ အန္တရာယ် အကြောင်းသိကောင်းစရာ လျှပ်စစ်ဒယ်အိုးနီကို အသုံးတည့်တော့ အိမ်တိုင်းလိုလိုဝယ်သုံးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အန္တရာယ် ကင်းအောင် သုံးတတ်ဖို့လိုတယ်လေ… ဒီ …လျှပ်စစ် အကြော်အိုး တွေကတစ်ပိုင်းစီဖြုတ်ဆေးလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်တော့ အလုပ်ရှင် တွေကို သေသေချာချာပြောပြပေးခဲ့ရတယ် ….. ။ အိမ်မှာ ဒယ်အိုးနီ သုံးတယ်ဆိုရင် […]
ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ဖို့က အနာဂတ်အိမ်မက်ပါလို့ပြောတဲ့ သည်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအမှတ်အများဆုံးရသူ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲမှာ စုစုပေါင်း အမှတ် ၅၅၅ မှတ်နဲ့ တနိုင်ငံလုံး အမှတ်အများဆုံး ရရှိတဲ့ မောင် ကျော်လင်းသန်း ကတော့ ဆေးတက္ကသိုလ် ကိုသာ တက်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ် …. ။ သူက တစ်ဦးတည်းသော သားဖြစ်ပြီး […]
စကားများတဲ့သူတွေသာရနိုင်မယ့် အံ့သြလောက်စရာကောင်းကျိုး(၆)မျိုး စကားများတဲ့သူတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ အာရုံနောက်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်စရာရှိပေမယ့် သူတို့တွေဟာ ထူးခြားတဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေရှိပြီး အောင်မြင်နိုင်ချေပိုများတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ စကားများတဲ့သူတွေဘာလို့အောင်မြင်နိုင်ချေပိုများရတာလဲဆိုတာကတော့ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါတဲ့ …. ။ (၁) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ် စကားများတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးပြောရမယ်၊ လူတစ်ယောက်နဲ့အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုဝင်ရမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတဲ့၊ အထာနပ်တဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့ […]
၆ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့်မအောင်မြင်မီကပင် သာသနာ့တာဝန် ထမ်းရွက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ရှင်ကုဏ္ဍလ (ထီးလင်း)
၆ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့်မအောင်မြင်မီကပင် သာသနာ့တာဝန် ထမ်းရွက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ရှင်ကုဏ္ဍလ (ထီးလင်း) ————- ————- ——————— ယနေ့ ဒသမတန်း အောင်စာရင်းတွေထွက်ရှိပါသည် …. ။ ဗုဒ္ဓစာပေ သင်ယူဖို့သာသနတာဝန် ထမ်းရွက်ဖို့ရဟန်းပြုလာသူ… ထီးလင်းမြေမှ မောင်အောင်ကောင်းဆက်ပါ …. ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမှာ မလ -၄၁၂ […]
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း သိရသလောက်ပါ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း သိရသလောက်ပါ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Page ထဲ ဝင်ပြီး Like & See First လုပ်ထားပေးနော် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Page ထဲ ဝင်ပြီး Like & See First လုပ်ထားပေးနော် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Page ထဲ ဝင်ပြီး […]
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း သိရသလောက်ပါ
ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာ အောင်စာရင်း
ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာ အောင်စာရင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာ Page ထဲ ဝင်ပြီး Like & See First လုပ်ထားပေးနော် ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာ Page ထဲ ဝင်ပြီး Like & See First လုပ်ထားပေးနော် ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာ […]
ဧရာဝတီတိုင်း အောင်စာရင်း ဧရာဝတီတိုင်း Page ထဲ ဝင်ပြီး Like & See First လုပ်ထားပေးနော် ဧရာဝတီတိုင်း Page ထဲ ဝင်ပြီး Like & See First လုပ်ထားပေးနော် ဧရာဝတီတိုင်း Page ထဲ ဝင်ပြီး […]